Muqaal laga Duubay Ciidamada Juubbland oo Gaaf wareegayo magaalada Mandheere ee Dhulka Kenya
Itoobiya oo dabaaldageysa danadguuradii 47 ee dagaalkii soomaliya lagashay
Dalka itoobiya oo uu hogaaminaya Abiye Axmad ayaa kudabaaldagaya maanta sanad guuradii 47 ee soomaliya kula dagaalameen 77 siyaad bare iyo dalka soomalida xasuusta gaarta ulahe.
Abey ahmad ayaa kusoo qoray beejkiisa isagoo kusheegaya in soomalida dagaalka eey kusoo qaaday itoobiya khalad ahaa eey waliba kujabeen dagaalkaa itoobiyana guul gaartay.
hadaba soomalidii meeday dabaal dagilahed oo xusilahed maalinta xasuusta mudan oo laladagaalamay itoobiya lagana adkaaday .
Danaha itoobiya ayaa ah aarsi iyo ineey soomali guul kagaarto mar un maantana waa umuuqataa ineey gaadhayaan madaama eey soomalida madaxdooda utashaan.
inta uu farmaajo kasoo amar qaadanayo abey Ahmad ayaa ah soomalida mid lawato oo danaha lagaga gaarayo.
Xaalada magaalada Mandhera oo kacsan kadib markii ciidamada Jubbaland gudaha u galeen
​Xiisada ka taagan xuduuda Soomaaliya iyo Kenya ayaa maanta oo khamiis ah kacsan kadib markii ciidamada Jubaland ay gudaha u soo galeen xuduuda Kenya ay wadaagaan Soomaaliya.
Ciidamada Jubuland ayaa la arkayay iyagoo si xor ah ugu socdaay qeybo ka mid ah magaalada xuduuda Kenya ee Mandheera maalin un kadib markii madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu soo saaray xabbad joojin
Guddoomiyaha gobolka Mandhera Cali Robow ayaa qatar amni oo weyn ku tilmaamay arrintaan, wuxuuna ugu baaqay dowladda Kenya inay xaaladaan soo fara galiso ka hor inta uusan imaanin khasaaro nafeed.
Gudoomiyaha ayaa sheegay dagaalka udhaxeeya ciidamada Jubbaland iyo FGS uu kasii daray uuna ku qasbay qaar kamid ah dadka deegaanka inay ka cararaan guryahooda.
Kenya oo Dagaal isku diyaarisay Isgaarsiintana Kajartay Mandheera.
Wararka aan ka helayno magaalada Mandheera ee xuduudda la leh Soomaaliya ayaa sheegaya in tan iyo saqdii dhexe ee xalay uu hawada ka maqan yahay adeegga shirkadda Safaricom ee ugu weyn isgaarsiinta Kenya.​
Wararka ayaa sheegaya in wali qeybo ka mid ah magaalada ay ku sugan yihiin askar ka tirsan ciidamada Jubbaland ee dhawaan laga saaray fariisinkii ay ku lahaayeen xuduudka.
Wararka ayaa intaa ku darraya in wali ay xiran yihiin iskuullada, shacabkuna aysan ku laaban xaafadaha uu saameeyay dagaalkii Isniinta dhacay.
Waxaa xusid musan in anteenada Safaricom ee Mandheere ay hawada ka maqneyd intii uu socday dagaalkii Isniinta.
Wali lama ogga halka ay ku sugan yihiin mas’uuliyiinta Jubbaland ee horkacayay ciidamada ku sugnaa xuduuda, kuwaas oo ay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeen Maxamuud Sayid iyo Wasiirka amniga Cabdirashiid Janan.
Maxeey sookordhisay Deenta Soomalia Lagacafiyey iyo sababta eey dowlada igufaneysaa ineey guul gaartay iyadoona waxba soo kordhin lataabto.
Dowlada somalia ayaa baryahan bara saxafada soo dhigta hadal eey kufaneyso ineey guul gaartay deenta soomaliya lagacasilay darteed.
Hadaba deentan ayaa ah mid hore ugu jirtay process oo dawlidihii kahoreyey soomalida ah eey kashaqeyeen taas oo ah mid eey iyagu sameen ee siidabagaleen uun.
hadaba Deentan lagacafiyey somalia ayaa ah mid wax kusoo kordhineen waqtigan xaaliga ah ama kadhimeen waayo waa eey losocdaan calamka soomalia ineey wax soosarin dhaqaalana laheyn markaa dowlada somalia maha ineey iskumashquulaso waqtigan hada taagan laakin waxa eey dooneysaa waa taageero iyo ineey tidhahdo waxbaan qabtay sideey dowrashada ugusoo gasho ajindaha danbe.
Dawladihii Caalamka iyo heyadihii Soomalia lacagta siinjiray oo kagaabsanaya caawinaada soomaliya Sababta dagaalada eey abuurtay darteed.
Dowladaha Caalamka ayaa usoo jeedshay cambaareen kadhan Dawlada dalka Soomalia igu horeen dalka Mareekanka oo markii hore Kutaageray Dagaalkii Galmudug Hadana walaac badan kamuujay Jubaland ciidamadan Lagu daabuleynayo.
Mareekan iyo Kenya ayaa ah Labadal dano gaar ah kaleh Soomalia Hadeeytahay Dhanka amaanka ama Kheeratka Dalka.
Hadaba Farmaajo Makulatahay inuu awoodi doono inuu Jabsho xeerka Calamka road Map ka somalia loo sameyey inuu gacanta kudhufto oo uu kudhaqaajiyo waxa uu damacsanyahay.
Dowlada Maraekanka ayaa kasoo saartay cambaareen lacambareynayo Dowlada Soomaliya.
Qoraal ay soo saartay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa waxaa looga hadlay dagaalkii ciidanka dowladda federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland ku dhexmaray afaafka hore ee magaalada Belad xaawo.
Safiirka safaaradda Mareykanka Ambassador Donald Yamamoto, ayaa tilmaamay in xilligan aan loo baahnayn in la kala dhantaalo ciidankii isku mowqifka ahaa islamarkaanka waxa uu sheegay in oo baahanyahay in la xaliyo xiisadda Belad xaawo.
Sidoo kale Ambassador Yamamoto ayaa ku baaqay in xal siyaasadeed laga gaaro khilaafka soo cusboonaaday, isaga oo tilmaamay in dhamaan hoggaamiyeyaasha looga baahanyahay in ay la yimaadaan dulqaad si natiijo wax ku oola loo gaaro.
Ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shalay ku dagaalamay qeybo ka mid ah demada Beladxaawo ee gobalka Gedo.
Siyaasada Farmaajo Iyo kheere oo ah mid fashilan beesha caalanka oo ku amran aneey dagaalka joojiyaan.
Farmaajo iyo kheere ayaa ah kuwa kufashlmay siyaasada dalka soomaliya
waayo fikirkooda caburinta ah ayaa ayee kula kacayaan dhamaan qofkasta kasoo horistaago siyaasadan guracan oo umada wada arkaan.
hadaba farmaajo iyo kheere ayaa beesha caalamka ugadigeysaa ineey dagaal qabiil dib u abuurin oo soomaliya ku celisa burbur iyo nadaamlaan iyo alshabaab oo jaanis helaya bal siyaasi kasta oo beelkasta kasoo jeeda waxa uu arkaa halka uu dalka usocdo iyo siyaasada gurcan.